Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Witcher: riyadii riwaayada Wolf' markii ugu horeysay ee filim xiiso leh la daawado!
Warar Naxdin LehFilimooyin naxdin lehNetflix (filim)Trailer (filim)
Witcher: Habeenki Wolf waxaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo barnaamijka 'Netflix' Ogosto 23, 2021, oo durduriyaha ayaa kaliya hoos u dhigay filim buuxa oo naga dhigaya inaan tirino maalmaha!
Soo koobista filimka filimka leh ayaa akhrinaya:
Dunida Witcher waxay kusii fidaysaa sheekadan asalka anime: Geralt kahor, waxaa jiray la taliyihiisa Vesemir - sixir barar da 'yar oo sixiroole ah kana soo fakaday nolol saboolnimo si loogu dilo wuxuushta shilimaad ahaan. Laakiin markii bahal cusub oo la yaab leh uu bilaabay inuu argagax galiyo boqortooyo siyaasad ahaan qasan, Vesemir wuxuu isku arkaa qibrad cabsi leh oo ku qasbeysa inuu ka horyimaado jinniyadiisii ​​hore.
Gawaarida waxaa sii dheer, waxaan haynaa liis jilayaal la xaqiijiyay laga soo bilaabo waqtiga kama dambaysta ah waxaa ka mid ah Theo James (Kala Duwan ruqsad) sida Vesemir, Lara Pulver (Shisheeyaha: Malaggii Mugdiga), Graham McTavish (Castlevania), iyo Mary McDonnell (Battlestar Galactica).
Witcher: Habeenki Wolf waa mid ka mid ah laba mashruuc oo isdabajoog ah Witcher The taxane uu jilayo Henry Cavill oo lagu dhawaaqay Netflix. Witcher: Asalka Dhiiga, taxane kale oo ficil ah oo toos ah oo loo dhigay 1200 sano kahor dhacdooyinka taxanaha ugu weyn ayaa sheegi doona sheekada abuuritaanka noocii ugu horreeyay ee Witcher. Michelle Yeoh (Baaruud Milkshake) ayaa dhowaan lagu dhawaaqay inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha taxanaha ah.
Witcher The abuuraha, Andrzej Sapkowski wuxuu u adeegaa lataliye dhamaan mashaariicda Netflix iyadoo lagu saleynayo buugaagtiisa iyo sheekooyinkiisa.
Fiiri goos gooskaas Witcher: Habeenki Wolf hoosta, oo noo sheeg haddii aad daawan doontid marka ay ku soo dhacdo mashiinka qulqulka bisha soo socota!
Andrzej SapkowskiGavin McTavishLara PulverMary McDonnellNetflixWitcher TheWitcher: NIghtmare ee WolfTheo JamesWaylon Jordan